Toetra Ràja Finoana Paska Mamafaza voa Fasana Tononkalo Poezia Poeta lalantsara lala-mankany sampanana
18 avrily 2017
Mitohy hatrany ny fitafatafana amina mpanoratra iray. Ka i Toetra Ràja no mivahiny eto ary tafatafa mitohy izy ity no sady laha-dinika mifandraika amin'ny vanim-potoana diavina.
Miarahaba anao Toetra Ràja. Alahadin’ny Paka no malaza. Nankalaza izany ve ianao ?
Toetra Ràja. Miarahaba ny gazety www.lakroa.mg sy ny mpiserany, indrindra moa amin’izao nahatratrarantsika ny fetin’ny Paka izao.
Araka ny fahalalako azy dia ny Paka no fety lehibe indrindra amin’ny Kristianina ka ankalazana ny fitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty. Tsy nahatohitra Azy ny fasana. Fandresena miezinezina izany satria noporofoiny fa Izy no zanak’Andriamanitra lahitokana nidina niara-konina tamintsika ho famonjena antsika noho ny fahotana.
Raha ny tena marina aza dia isak’alahady no ankalazana izany satria noho io andro fahatelo tao aorian’ny nanohomboana Azy tamin’ny hazo fijaliana io no nahatonga ny andro fiangonana ho alahady fa tsy sabotsy (na sabata) intsony. Tsarovy fa ny alahady isika dia maharay fiantsoana hanatona ny Tompo.
Eny, anisan’ireo nankalaza ny fetin’ny Paka aho io Alahadin’ny Paka io. (TTF : marihina fa ny vahiny dia manonona Paska sy Jesoa fa isika kosa manoratra izany ho Paka sy Jesoa)
Natsidikao teo ny resaka fasana. Tokony hatahorana ve?
Toetra Ràja. Voalaza fa nandresy ny fasana i Jesoa ary niakatra any an-danitra. Miandry izay hiverenany isika ary mivonona hatrany mba handresy ka hanara-dia Azy koa rehefa migadona izay fotoana hiverenany izay. Io ilay antsoina hoe "miambina" satria tsy fantatra na ny andro na ny ora hiaviany indray. Tokony hatahorana ve ny fasana na ny fahafatesana ? Amin’ny maha nofo sy ra ny tenantsika dia eny. Saingy izao, raha ny ara-panahy dia tokony tsy hohadinoina ilay hira hoe "Efa resy izao na dia ny fasana aza".
mantsy ny ady
ny ao anaty
12 septambra 2016 in TIAKO - TIAKO FOANA!
Eny am-piandohan’io tononkalo io, mampivarahontsana ny hetraketraky ny fasana. Iombonan’ny poety ve ny tahotra azy?
Toetra Ràja. Mitombina tokoa ny tahotra. Maro ny asa soratra poety maneho ny fangirifiriana ateraky ny fahafatesana. Misy amin’izy ireo mantsy no nandevin-janaka, nitondra tena ary namono tena aza. Izany indrindra angamba no nahatonga an’i Samuel Ratany naneho ny ahiahiny amin’ilay tononkalo hoe: "Izay ho feoko eo am-pialana aina".
Fa misy ihany ny poety mety tsy mirona any amin’izay ahiahy izay !
Toetra Ràja. Ny fantatro aloha dia tsy vitsy ireo poety misahana asan’ny Pasitera toa an-dry Ravelojaona sy ry Rô Andriamaneva. Misy Mompera sy Masera poety koa angamba.
Ary ianao manokana ?
Toetra Ràja. Sarotra ny mandainga fa anisan’ireo voakasiky ny tahotra aho. Kanefa efa namboariko ny saiko ary vonona hiatrika izany aho amin’ny fotoana higadonany araka ny efa nisaintsainako azy hoe :
“Tony aho, tena tony, eto am-bodifiakarana. Vonona hiatrik’ady, fiandohan’ny ora farany. Eto mantsy - tena eto - ilay toerana hisarahana. Tony aho ary sahy hiatrika ny famaranana”.
Ny zava-dehibe ao anatin’izany dia izao : ilaina mandrakariva ny fahavononana hitsena ny Tompo amin’ny alalan’ny fo amam-panahy voadion’ny fibebahana sy famelan-keloka.
tsy ho foana
ho azy ny sazy ?
aho no dikan’izany :
izay no mba hany
Miverimberina matetika ao amin’ny bokinao TIAKO - TIAKO FOANA! io hoe "lala-mankany" io. Toy izany koa ny "lalantsara" sy ny "lalan-tiako". Ahoana marina io lalana tianao hitondrana ny mpamaky io ?
Toetra Ràja. Misy sarintany izay miverimberina ato an-tsaiko rehefa irery iny aho.
“Ao antsefatsefak’efitra, ao an-dalantsara ao, no miantefa ny eritreritra, iheverana ny atao, anapahana ny haleha. Aiza hoy ny mpanontany. Sarintsarin’arabe ao an-tsaina no iandohany”.
Asehoy anay mazava hoe io sarintsarin’arabe io.
Toetra Ràja. Rehefa tonga eo ambodin-tsampanana izay isika dia roa ihany no lalana azo isafidianana.
1- Misy an’ilay lala-masaka aloha, ilay fanaovana hitsin-dalana, araka ny fitenenana. Malalaka sy mora idirana iny ka be olona. Tandremo anefa fa mety hanjakan’ny "hazakazaka ambany farafara" any ka samy manao izay ho afany ny olona. Ny mahazendana koa dia toeran’ny korontana sy ny samy maka ho azy ary ny tsy rariny ao anatiny.
2- Ny faharoa kosa dia lalana ety ary vitsy olona. Any anefa no ahafahana "miambina" ny fiverenan’ny Tompo izay ho tampoka dia ho tampoka araka ny efa voalaza.
Misy ohatra azo omena ve ny momba io "lala-mivaona mandavan-taona" io ?
Toetra Ràja. Any amin’ilay voalohany, izany hoe ilay "manavanana" ny maro ohatra no misy ny halatra amin’ny endriny maro toy ny:
Halako re! Resy lahatra aho satria...
tsy mba fanaon’
misy tsy marina
Azo lazaina fa tsy mora izorana anefa izany lalanao izany!
Toetra Ràja. Entina am-bavaka, am-pifaliana sy am-pitiavana ny zavatra rehetra ary arahina asa sy finoana.
28 martsa 2008
Mamafaza voa, hafatra napetraky Toetra Ràja ary ametrahany mandra-pihaona amintsika mpisera indray. Misaotra tompoko!
Toetra Ràja. Misaotra ny tranonkala www.lakroa.mg
sy ireo mpitsidika ny efitra fandraisana ny pôety ity.